Itsva Mumabhaisikopo Chete - Kisimusi Nevakasarudzwa: The Messenger
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Nyowani Mumabhaisikopo Chete - Kisimusi Nevakasarudzwa: The Messenger
Nyowani Mumabhaisikopo Chete - Kisimusi Nevakasarudzwa: The Messenger
Kunyora chiitiko chepasirese cheVakasarudzwa, Krisimusi NEVAKAMUSORO: VAMWE NUMERI, yekutanga yefranchise kuonekwa mumabhaisikopo munyika yose kuburikidza neFathom Zviitiko, yakatengeswa panguva yekuyerera kubva kuDallas Jenkins Chipiri manheru, uye yakapwanya marekodhi ekutanga kutengeswa kwe. muparidzi.
"KRISMASI NEVAKAMUSONWA: VARUME vakatyora rekodhi yeFathom Zviitiko nemadhora 1.5 miriyoni mukutengesa mumaawa gumi nemaviri ekutanga," akadaro Ray Nutt, CEO weFathom Events. "Pakutanga takatemerwa kutanga mumitambo yemitambo 12, takatowedzera nzvimbo mazana mana nemakumi mashanu+ nezviuru zvemasikirini kugutsa zvinodiwa uye kutarisira kuti nhamba idzi dzicharamba dzichikura."
Kupfurwa zvachose muchivande, VANHU vanoratidza kuzvarwa kwaKristu kuburikidza nemaziso aMaria naJosefa uye inoratidza vatambi kubva kuThe Chosen series.
Chiitiko ichi zvakare chine zviitwa kubva kune zvinoshamisa maChristian artists nemapoka anosanganisira Phil Wickham, Maverick City Music, For King and Country, Brandon Lake uye zvimwe zvakawanda.
Chiitiko ichi chinoitika mumabhaisikopo kutanga Zvita 1. Masikirini matsva nemazuva ekutamba ari kuwedzerwa kuti aenderane nezvinodiwa, uye TheChosen.tv/Kisimusi ichava neruzivo rwenzvimbo yako. KRISSIMUSI NEVASARUKWA: nhume dzinoburitswa kuburikidza neFathom Zviitiko.
"Patakafunga kuita chikamu chakakosha cheKisimusi, takaziva kuti yaizova nguva yakakodzera kuti tiise izvi pachiratidziro chikuru," akadaro Musiki, Munyori uye Director Dallas Jenkins. “Mukana wekutanga wawana vateveri veChosen kuti vaungane munyika yose, saka isu tine chinangwa chekuita kuti zviitike. Uye nevaimbi vese vanoshamisa vakaungana, ichi chiitiko chakanakisa chekukoka shamwari. "
Rondedzero yevatambi veKRISMASI NEVAKAMUSONWA: THE MESSENGERS parizvino inosanganisira:
• KwaMambo neNyika
• Bryan naKatie Torwalt
• Isu Umambo
• Vatambi vanobva kuThe Chosen vakatamba vachiita monologues:Austin Reed Alleman (Nathaniel) Giavani Cairo (Thaddeus) Luke Dimyan (Judas)Lara Silva (Edeni)